လူတိုင်းရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ အခ ျို့ ရုပ်ရှင်တွေက အပန်းဖြေမှုတစ်ခုဆိုတာထက်ကိုပိုတဲ့ ခံစားမှုတွေ၊ အသိအမြင်တွေကို ကြည့်ရှုသူတွေကို ရရှိစေပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ စီးပွားရေးကို စိတ်ဝင်စားသူတွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကသူတွေ ကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား (၁၀) ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းတွေမပြောနေတော့မပါဘူး။ ကြည့်တဲ့အခါဖီးလ်ပ ျက်သွားမှာဆိုးလို့ပါ။ 1. The Wolf of Wall Street 2. Tucker: The Man and His Dream 3. The Insider 4. The Big Short 5. Office Space 6. It’s A Wonderful Life 7. The Smartest Guys in the Room 8. The Godfather 9. Barbarians at the Gate 10. Joy 11. There Will Be Blood 12. Inside Job 13. The Social Network 14. Thank You For Smoking 15. Up In The Air 16. Wall Street 17. Jerry Maguire 18. Boiler Room စီးပွားရေးဗဟုသုတွေပေးနိုင်တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းကောင်းတွေသိတယ်ဆိုရင်ဒီပို့စ်အောက်မှာ မန့်သွားပေးပါအုံးနော်။